Free Thinker: ပိုးသတ်ဆေးအကြောင်း သိကောင်းစရာ
(ကော်တက်စီ ဘိုင် ဦးကိုကိုမောင်)
မည်သည့်ကုမ္ပဏီ မည်သည့်နိုင်ငံမှထုတ်သည်ဖြစ်စေ ပိုးသတ်ဆေးအတွက် ဖော်ပြထားသော တံဆိပ်မှာ အားလုံး တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်ရမည်။
ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားခွဲခြားရန် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပိုးသတ်ဆေးကို အဓိကအသုံးချမည့်နေရာ
AS - အာဆင်းနစ်ဒြပ်ပေါင်း
CU - ကြေးနီဒြပ်ပေါင်း
HG - ပြဒါးဒြပ်ပေါင်း - - စသည်
အသုံးချသည့်နေရာကို သင်္ကေတဖြင့် ဖော်ပြထားရာ အချို့ကို နမူနာအဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
F – Fungicide - မှိုသတ်ဆေး (မျိုးစေ့များမှလွဲ၍)
PGR – Plant Growth Regular (အပင်ကြီးဆေး)
R - Rodenticide (ကြွက်သတ်ဆေး)
L - Lavicide (ပိုးလောက်လန်းသတ်ဆေး)
M - Miticide (ကမျဉ်းနီပိုးသတ်ဆေး)
FST - Fungicide, for seed treatment (မျိုးစေ့အတွက် မှိုသတ်ဆေး)
H - Herbicide (ပေါင်းသတ်ဆေး)
I - Insecticide (အင်းဆက်ပိုးသတ်ဆေး)
WHO အဖွဲ့ကြီးက ထောက်ခံထားသော ပိုးသတ်ဆေးအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက် ကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သော၂၈ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးညီလာခံကြီးက အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲလာခဲ့ကြသည်။
WHO က သတ်မှတ်ထားသည့် ရေတိုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေသတ်မှတ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်၏။
WHO Class for Pesticide
LD50 for the rat
၅ မှ ၅၀
၅၀ မှ ၂၀၀
၅၀ မှ ၂၀၀၀
၂၀၀ မှ ၂၀၀၀
၅၀၀၀ နှင့် အထက်
ဤတွင် ဖော်ပြထားသော LD50 တန်ဘိုးကို ရှင်းပြပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့် LD505mg/Kg ဆိုသည်မှာ ၁ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသည့် ကြွက် အကောင် ၁၀၀ ကို ပိုးသတ်ဆေးချည်း (သို့မဟုတ်) ဓါတုဗေဒပစ္စည်းစစ်စစ် တစ်ခုကို ၅ မီလီဂရမ် ကျွေး လိုက်ခြင်းဖြင့် ကြွက် အကောင် ၅၀ သေလျှင် 5mg/kg နှုန်းထားရှိသော ထိုဆေးကို LD50 (Lethal Dose 50) ဟု ခေါ်ပါသည်။ ဥပမာ - ပါရာစီတမော့၏ LD50 တန်ဘိုးမှာ 1250/kg ရှိ၏။ ၈၀ ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသူတစ်ဦးအတွက် ၁၂၅၀ x ၈၀ = ၁၀၀၀၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးတစ်လုံးလျှင် ၅၀၀ မီလီဂရမ်ရှိသဖြင့် ဆေးအလုံး ၂၀၀ တစ်ပြိုင်နက်သောက်ပါက သေရန်ရာခိုင်နှုံး ၅၀ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။
ထို့ကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ၈၀ ကီလိုဂရမ်ရှိသူတစ်ဦးအနေနှင့် LD50 - 5mg/kg ရှိသောဆေးကို ၄၀၀ မီလီဂရမ်လောက် သောက်မိပါက သေဘို့တစ်ဝက် သေချာနေပြီဟု ဆိုလိုပါသည်။ (၅ x ၈၀ = ၄၀၀)
၂၁ - ၁၁ - ၂၀၁၂ နေ့လည် ၄း၂၁ နာရီ (Revised)
ဆရာရေ .... ဒီမှာတော့ LD50 Value ကို ppm နဲ့မပြောဘူးဆရာ ဥပမာ >5mg/Kg ဆိုတာ LD50 Value မှာ 1 Kg weight ရှိတဲ့ ကြွက်တစ်တွေကို ဆေးရဲ့ အဆိပ်အစစ် a.i. 5mg ကြွေးကြည့်ရင် အကောင် ၅ဝ (50%-ပေါ့) သေစရင် သူ့ရဲ့ LD50 Value က 5mg/Kg လို့ပြောတာပါဆရာ ...
ဆရာ ခင်ဗျား ဒီနေရာ မှာ LD50 နဲ့ ပြောတဲ့အခါ ppm နဲ့ မပြောပါဘူးခင်ဗျာ ... LD50 Value ကိုရှင်းပြရရင် ဥပမာ LD50 5mg/Kg လို့ရေးထားတယ်ဆိုပါစို့ ... ဒီဟာကဘာပြောသလဲဆိုတော့ 1Kg အလေးချိန်ရှိတဲ့ ကြွက်အကောင်(၁ဝဝ)ကို ပိုးသတ်ဆေး(သို့)ဘယ် Chemical ပဲဖြစ်ဖြစ် သူရဲ့ pure a.i. အဆိပ်အစစ် 5mg ကြွေးကြည့်ရင် အကောင် ၅ဝ သေသွားရင် ဒီနှုန်း (5mg/Kg) ကို LD50 (lethal dose 50) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ 80Kg ရှိတဲ့ ကျွန်တော်ဆိုရင် 400gm လောက် Oral (ဆို) ပါးစပ်ထဲဝင်သွားရင် 50% သေဖို့သေချာနေပြီလို့ဆိုလိုတာပါ။ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့သောက်သုံးလေံရှိတဲ့ အကိုက်အခဲပြောက်ဆေး Paracetamol ဆိုပါတော့ သူ့ရဲ့ LD50 Value က 1250/Kg ရှိပါတယ်။ ဆိုတော့ စောစောကလိုတွက်ရင် ကျွန်တော့် Body weight အတွက် 1250 x 80 ဆိုတော့ 100000mg ပါ။ တစ်လုံး 500 mg ဆိုတော့ အလုံး ၂ဝဝ တစ်ပြိုင်နက်ထဲသောက်မိရင် သေဖို့ 50% သေချာပြီပေါ့ .. လေးစားစွာဖြင့် ကိုကိုမောင်
mg/kg က ppm နဲ့ အချိုးတူနေတော့ ကျွန်တော်က ppm နဲ့အတူတူပဲလို့ ယူဆမိသကိုးဗျ။ ppm က များသောအားဖြင့် အရည်မှာသုံးတာ။ ခုဟာက အခဲဆိုတော့ ယူနစ်ခြင်းမတူတာပေါ့။ ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါကိုမောင်။ ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်ပါ့မယ်။